Casharkaan oo ku saabsan miraha Ingiriisiga, waxaan ku baran doonaa sameynta jumlado muunad ah oo ku saabsan magacyada miraha ee Ingiriisiga, higgaadinta iyo ku dhawaaqidda miraha Ingiriisiga, iyo sidoo kale tusaalooyinka miraha Ingiriisiga.
Waxaan kuu diyaarinay muuqaallo waawayn oo hoos ah. Way fududahay barashada Ingiriisiga oo leh sawirro. Waxaad si fudud ugu baran kartaa mowduuca midhaha ku jira Ingiriisiga oo leh muuqaalkeenna macaan iyo kuwa xiisaha leh. Waa kuwan nimcooyinka wanaagsan ee Eebaheen inagu maneystay. Marka hore, fiiri miraha ingiriiska ee sharaxaadda sawir leh, ka dib waxaad ku arki doontaa miraha Ingriiska oo leh liisaska Turkiga ee u dhigma. Waxaad ku baran doontaa waxyaabo badan oo ku saabsan miraha ingiriisiga ah markaad hoos ugu sii dhaadhacdo salka boggayaga.
Midhaha Ingiriisiga (oo wata Sawirro)
TR: Cananaaska EN: Cananaaska
TR: Cinabka EN: Canab
TR: Peach EN: Biij
TR: Orange EN: Liin dhanaan
TR: Limon EN: Liin dhanaan
TR: Jaantuska EN: Sawir
TR: Qaraha EN: Qaraha
TR: Melon EN: Qaraha
TR: Abrikot EN: Abrikot
TR: Qumbaha EN: Qumbaha
TR: Grapefruit EN: Canab
TR: Erik EN: tubta
TR: Apple TR: Tufaaxa
TR: Pear EN: ku'saabsan
Magacyada Khudradda ee ugu caansan Ingiriisiga
Sida luqadaha oo dhan, magacyada miraha waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa Ingiriisiga. Si kastaba ha noqotee, qaar ka mid ah kuwani waxay u dhacaan si ka badan kuwa kale. Kuwaas waxaa loo arkaa sidan soo socota;
Waxaa lagugula talinayaa inaad barato intaad shaqeyneyso, oo aadan xafidin. Maxaa yeelay xafididda xafidnimadu waxay si dabiici ah kuu sababi doontaa inaad ilowdo, haddii aanad ku celcelin xoogaa ka dib. Sidaa darteed, geeddi-socodka oo dhan ayaa sidoo kale lumin doona, waqti lumis aan micno lahayn.
Marka, waa maxay u dhigmayaasha Turkiga ee ereyadan iyo sidee ugu dhawaaqeen?
Magacyada Miraha iyo Ku Dhawaaqida Ingiriisiga
Mawduuca ku dhawaaqiddu waa mid ka mid ah dhibaatooyinka waaweyn, gaar ahaan ardayda iyo kuwa ku cusub Ingiriisiga. Mid ka mid ah sababaha tan ayaa ah iyada oo aan fiiro gaar ah loo siin arrinta. Si kastaba ha noqotee, ku dhawaaqid qaldan waxay yeelan kartaa macno kala duwan xaaladaha qaarkood.
Waxyaabaha u dhigma midhaha Ingiriisiga iyo sida loogu dhawaaqo waa sida ku xusan jadwalka hoose.
Miraha Magacyada Turkiga Ku dhawaaqida
Khamriga abrikot Eprikit
Banana mooska Dhisme
Blackberry blackberry Xarkaha gacanta
meeyay Buluuga Xaydha
qumbaha Hindiya Hindiya Qumbaha
berdihii berde berdihii
Canab Cinab Greyp
bambeelmo bambeelmo Greypfuriyt
Lemon Beerka Lemin
Lime Liin dhanaan Laym
Mandarin Mandarin Qoyan
qaraha qaraha Melin
babaygu babaygu Pepaya
Xaraaradda Fruit Midhaha Dareenka Furiyt Hore
Biij fersken Baastar
ku'saabsan baaraha Fiiq
cananaaska cananaaska Paynepil
khudaar bulug Erik Pılam
rummaanka rummaanka Rummaanka
Raspberry miro guduud Razberiy
strawberry strawberries Sitrowbar
Qaraha qaraha Wotramel
Jadwalka I: Midhaha ku qoran Ingiriisiga, afkooda Turkiga iyo sida loogu dhawaaqo
Barashada kuwan waxay hagaajineysaa eray bixintaada waxayna kuu sahleysaa inaad si firfircoon u isticmaasho luuqadda.
Intaad baraneyso Ingiriisiga, ereybixintu aad ayey muhiim u tahay iyo sidoo kale aqoonta naxwaha. Si aad ugu hadasho Ingiriisiga si fiican, waxaa lagama maarmaan ah in la helo eray bixin sare. Qodobkaan, waxaad ku aqrin kartaa macnaha magacyada miraha ee Ingiriisiga iyo sida loogu adeegsado wadahadalkaaga maalinlaha ah.
Liiska erayada Ingiriisiga Waxaad arki kartaa macnaha miraha aad loo isticmaalo. Xusuusnow inaad barato ereyadan had iyo jeer, qoraal ahaan iyo hadal ahaanba, si buuxda aad ugu qanacdo dhawaaqa saxda ah. Ku celceli inaad erey kasta kor ugu dhawaaqdo waxay kaa caawin doontaa inaad si fudud u barato Ingiriiska.
Aynu ku bilowno khalad guud. Cilmiga cilmiga dhirta, kala soocida dhirta sida miraha iyo khudradda waa waxa dad badani si qalad ah u ogaadaan. Miraha iyo khudaarta waxaa loo kala saaraa iyadoo loo eegayo qeybta geedka ay ka yimaadeen. Midhaha waxay leeyihiin abuur ka yimaada dhirta ubaxdeeda. Khudaartu waxay ka soo baxaan xididdada, nalalka, caleemaha iyo jirridaha geedka. Waxaan badiyaa ku tilmaamnaa qaar ka mid ah mirahaas inay yihiin "khudaar" (tusaale yaanyo, avokado, eggplant) laakiin runtii kuwani waa miraha.
Waxay leedahay qiimo ganacsi maadaama sidoo kale loo isticmaalo cuntooyinka dhammaaday sida khudradda, macaanka iyo marmalade. Xaqiiqdii, miraha oo dhan maahan kuwo la cuni karo. Boggan, waxaad ka heli kartaa miraha jikada ee caadiga ah macnahooda.
Barashada Midhaha oo Ingiriis ah
Hubso inaad ku dhaqanto erey kasta oo cusub oo aad la kulanto. Gaar ahaan isku day inaad ka jawaabto su'aalahan ku saabsan nolol maalmeedkaaga oo af Ingiriisi ah.
Kuwan keebaa ugu cadcad?
Ma fududahay in laga iibsado miro daray ah halka aad ku nooshahay?
Waa maxay miraha aadan waligaa isku dayin?
La soo bax warqad aad ku tababarto oo ku qor dhowr sadar si aad u horumariso ereybixintan (waxay kaa caawin doontaa inaad erayada si fudud u xasuusato). Waxa kale oo aad ku tababaran kartaa adigoo cod dheer la hadlaya naftaada ama saaxiibkaa.
Miro ku jira Tusaalooyinka Xukunka Ingiriiska
Kuwani waa qaraha.
Tani waa kiwi.
Dambiisha waxaa ku jira afar liin.
Waxaan jeclahay tufaax
Ma jecli cambaha.
Ma jecla liinta.
Tangerine waa miraha liinta.
Waa inaad cuntaa miro maalin kasta.
Waxaan iibsaday kiilo tufaax ah.
Waxaan jeclahay miro la qalajiyey.
Waxay jeceshahay cunista miro daray ah.
Sally waxay jeceshahay casiirka miraha.
Midhahaani waxay leeyihiin ur wanaagsan.
Beerta waxaa ku yaal geedo miro badan.
Qaraha waa midho xagaaga.
Marka hore, iskuday inaad u turjunto jumladaha kor ku xusan adiguba turki. Kadib ka hubi waxyaabaha soo socda si aad u hubiso khaladaadkaaga. Macnaha jumladaha ku saabsan midhahan Ingiriisiga ah ayaa ah sidan soo socota.
Kani waa muus.
Liinta ma jecla.
Wuxuu jecel yahay inuu cuno miro daray ah.
Midhahaani waxay leeyihiin udgoon fiican.
Geedka waxaa ku yaal geedo miro badan.
Miraha Su'aalaha Ingiriisiga
Waa maxay waxaan? - Kani waa oranjo.
Ma jeceshahay quince? - Haa, waan jeclahay quince.
Emma miyuu jecel yahay khudaar? - Haa, waxay jeceshahay khudaar.
Ma jeclaan lahayd xoogaa miro ah - Haa fadlan.
Midhahee aad ugu jeceshahay? - Waxaan aad u jeclahay liinta.
Miyaad xoqaysaa avocado? - Haa, waan sameeyaa.
Waa maxay miraha aad ugu jeceshahay? - Midhaha aan ugu jeclahay waa cherry.
Waa imisa kiilo oo ah strawberries?
Xagee qumbaha adduunka ka baxa?
Sideed u cuntaa cananaaska?
Emma miyuu jecel yahay abrikot? - Haa, wuxuu jecel yahay abrikot.
Mala xoqi karaa avocado? - Haa, waan yeeli doonaa.
Waa maxay miraha aad ugu jeceshahay? - Midhaha aan ugu jeclahay waa jeeriga.
Waa imisa kiilo oo strawberries ah?
Xagee qumbaha ka baxa adduunka?
Qoraalka Tusaalaha Midhaha oo ku qoran Ingiriis
Miraha runtii caafimaadkeena ayey u fiican yihiin. Qof kastaa waa inuu si caadi ah u cunaa. Sababo badan ayaa jira tan. Marka hore, uma baahnid inaad wax karsatid. Marka labaad, way fududahay in la helo. Ta saddexaad, waxay leeyihiin faybar aad ugu fiican dheefshiidka. Intaas waxaa sii dheer, miraha waxay leeyihiin kalooro yar. Marka culeys kuma kordheysid Intaas waxaa sii dheer, miraha waxay kahortagaan cudurada qaar sida wadne xanuunka iyo kansarka. Agagaarka, miraha waxay leeyihiin fiitamiino iyo macdan. Ugu dambayn, miraha waxay leeyihiin dhadhan iyo ur aad u wanaagsan. Waxaad leedahay sababo badan oo aad ugudareyso miraha caadooyinkaaga cuntada.
Adeegsiga Like / Ha jeclaan
Markii aan dhahno waxaan jeclaan miraha ama ma jeclin, waxaan u isticmaalnaa ereyga "like" miraha aan jecel nahay iyo "ma jecli" kuwa aanan jeclayn.
Tusaalooyin weedho mawduucan ku saabsan;
I sida tufaax / Dayaxa dareeraha / Waxaan jeclahay / jeclahay tufaax
Waxaad sida quince / yu like kuins / Waxaad jeceshahay / jacaylka quince.
We sida strawberry / wi like cytrober / waxaan jecel nahay / waan jecel nahay strawberries.
Waxaad sida cherry / cherry macaan / aad jeceshahay / aad jeceshahay jeeriga.
He sida mooska / hi sida bınena / Wuxuu jecel yahay / jecel yahay muuska.
Waxay sida liin / shi lik orınc / Wuxuu jecel yahay / jecel yahay liinta.
Waxay sida qaraha / Deylik malın / Waxay jecel yihiin / jecel yihiin qaraha.
Hadda aan tusaalooyin ka bixinno weedho taban:
I ma jecli Tufaax / Ma jecli tufaax.
We ma jecli Ma jeclin quince / Quince.
He ma jecli tubta / Isagu ma jecla tubta.
Waxay ma jecli saxanka / Uma jecla qaraha.
Waxaad ma jecli ku'saabsan
Midhaha Ingiriisiga ee Waxbarashada Aasaasiga ah
Ardayda dugsiga hoose, waxay si xiiso leh u bartaan maadada midhaha ku jirta Ingriiska. Barashada magacyada miraha waxay carruurta u noqon karaan wax aad u xiiso badan, halkan waxaad ka heli kartaa liistada magacyo miro oo af Ingiriis ah oo aad la tababaran karto carruurtaada yaryar.
Gaar ahaan carruurta dugsiga hoose iyo dugsiga barbaarinta, barashada Ingiriisiga waxay ugu fududaan kartaa heesaha iyo fiidiyowyada. Halkan waa baashaal fudud Heesta miraha ingiriiska lyrics waan wadaagi doonnaa Heestan waad la heesi kartaa ardaydaada ama ilmahaaga si ay ugu tababartaan.
"Heesta Miraha" Erayadii
Waxaan jeclahay liinta.
Iyagu waa oranji wayna wareegaan runtii waan jeclahay iyaga.
Waxay yihiin Juuli iyo macaan oo aad u dhadhan fiican!
Liinta ayaa ii fiican aniga!
Muus, Muus, Muus!
Iyagu waa kuwa kacsan oo aan jeclahay.
Waxay qaloocsan yihiin oo jaalle yihiin maqaar aad u qaro weyn.
Muusku aniga ayuu igu fiican yahay!
Waxaa jira noocyo badan oo miro ah.
Ma sheegi kartaa wax yar?
Mooska, Kiwis, Strawberries, Fersken, tufaax.
Midabyo, qaabab iyo cabirro aad u tiro badan.
Cherries, Canab, Qaraha, Barootada, Cananaaska iyo wax ka badan!
Strawberries runti waa yummy.
Waxay iga dhigayaan inaan doonayo inaan xoqo caloosha.
Waxay yihiin casaan casiir leh oo dhadhan fiican leh!
Strawberries wey igu fiican yihiin!
Canab Cinab Cinabadu waxay ku jiraan rucubood!
Waxay ku yimaadaan midabbo kala duwan, Madoow, Casaan ama Cagaar!
Waxay aad u yar yihiin oo dhadhan fiican yihiin, Cunto fudud oo fudud!
Canabku aniga ayey igu fiican yihiin!
Waan jeclahay qaraha. Waa midhihii ugu miraha badnaa.
dibedda ayuu cagaar ku yahay, gudahana guduudan.
Qaraha aniga wey ii fiicantahay!
Waan jeclahay gogo 'Cananaaska.
Waxay yihiin macaan oo macaan runtii waan jeclahay iyaga.
Waxay yihiin huruud iyo mid gaar ah oo dhadhan fiican leh!
Cananaaska waa ii fiicanyahay aniga!
Haddii aad isku dayeyso inaad ka hesho miraha aad jeceshahay dukaanka weyn ama aad rabto inaad ka hadasho midhaha aad jeceshahay iyo kuwa aanad jeclayn, waxaad u baahan doontaa inaad ku ogaato magacyada miraha midabyada ku qoran Ingiriisiga. Waxaa jira magacyo fara badan oo kala duwan oo la barto laakiin taasi micnaheedu maahan inay tahay hawl aan macquul aheyn, waxaad ku baran kartaa micnaha Ingiriisiga ee midho kasta waqti yar adoo baranaya in yar oo markiiba ah.
Saaxiibbada qaaliga ahow,
Sidaad la socotaan, barashada luuqad, gaar ahaan Ingiriisiga, waxay yeelatay ahmiyad weyn maanta. Ingiriisiga adduunka loo isticmaalo waa mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan kuwan. Ereygu waa mid ka mid ah caawiyayaasha ugu waaweyn barashada Ingiriiska. Hadallada badan ee la yaqaan, weedho badan baa la samayn karaa.
Midhaha Ingiriisiga waxay ka mid yihiin cunsurrada qaadaya meesha ugu ballaaran, in kasta oo ay u muuqdaan wax aan badnayn inta badan. Sababtoo ah miraha ingiriiska ayaa badanaa lagu sheegaa nolol maalmeedka. In kasta oo la ogyahay in ay jiraan miro badan oo adduunka ah, haddana magacyadooda Ingiriisiga lama yaqaan inta badan.
Xaaladdan oo kale, dhibaato weyn ayaa soo baxda haddii jumlad ay ku jiraan magacyo miro leh la sameeyo. Waxa kale oo ay adkeyneysaa in la fahmo qoraal ay ku jiraan magacyo miro ah. Marka mid ka mid ah waxyaabaha ugu horreeya ee ay tahay inaad sameyso markaad baraneyso Ingiriisiga waa midhi ku jirta Ingiriisiga. Haddii aad hadda bilowdo oo aad raadineyso meel dhammaan miraha ku jira liiska, kaliya fiiri miiskayaga.
Ku dhawaaqida saxda ah ee luuqad kasta waa mid aad muhiim u ah. Maxaa yeelay ku dhawaaqida qaldan waxaa laga yaabaa inuusan fahmin qofka kale. Xaaladdan oo kale, isgaarsiintu suurtagal ma noqon doonto. Sababtaas awgeed, waxaad ka baran kartaa sida loo akhriyo ereyada su'aasha miiskaaga.
Maxaa La Tixgelin Karaa Markaad Baraneyso Ingiriisiga?
Waxaa jira qaladaad badan markaad baraneyso Ingiriisiga. Barashada khaldan waxay si xun u saamayn doontaa nidaamka barashada luqadda. Maxaa yeelay aad ayey u adag tahay in la saxo wax si khaldan loo fahmay. Dad badan ayaa maalmahan qaata koorsooyin lagu barto Ingiriisiga. Qaadashada tababarka xirfadeed ee noocan oo kale ah ayaa ku bari doonta afkan si habboon. Si kastaba ha noqotee, suurtagal maaha inaad hesho natiijooyin haddii aadan isku dayin inaad barato naftaada.
Tan darteed, casharada la baray maalintaas waa in lagu celceliyo maalin kasta, oo dadaal shakhsi ah la sameeyaa. Haddii aad tababarka uga tagto si kale haddii loo dhigo, natiijooyinka waxay noqon doonaan kuwo aad u hooseeya.
Sidee Caruurta Loogu Bartaa Ingiriisiga?
Barashada luuqada waa in loo sameeyaa si ka duwan da 'kasta oo da' ah. Haddii tan aan fiiro gaar ah loo yeelan, dadku awood uma yeelan doonaan inay ka faa'iideystaan ​​waxbarashada ay heli doonaan.
Markaad baraneyso Ingiriisida carruurta, waxaad u baahan tahay inaad ka dhigto mid xiiso leh oo muuqaal leh. Dadka badankood waxay ka fikiraan fiidiyowyo iyo kartoonno Ingiriis ah halkan. Si kastaba ha noqotee, wax ku oolnimada barashada fiidiyowyada ayaa hoos u dhici doonta, maadaama Carruurta Ingiriisigu aysan weli horumarin.
Sababtoo ah inta ay luqad baranayaan, carruurtu waa inay baaraan oo ay bartaan ereyga ay arkaan. Sababta ugu weyn ee tan ayaa ah in caruurtu aysan isla markaa raaci karin subtitles iyo hadalka.
Tan awgeed, waxaa lagugula talinayaa inaad iibsato buugaagta majaajillada ah ee Ingiriisiga iyo buugaagta sheekooyinka loogu talagalay carruurta. Maaddaama cunsurrada laga hadlayo ay muuqaal ahaan ku saleysan yihiin isla markaana waxyaabaha u dhigma ay ku qoran yihiin Ingiriisida u dhiganta, barasho wax ku ool ah ayaa la sameyn doonaa Tusaale ahaan, markii erayga "muus" uu ka soo muuqdo sawirka "mooska", waa la fahmi doonaa wuxuu yahay, xitaa haddii uusan ku qorneyn af turki.
Marka, xalal wax ku ool ah ayaa la heli doonaa maadaama waxbarashada carruurta ay taageerto muuqaalada. Si kastaba ha noqotee, tani waa run haddii carruurtu aad u yar yihiin. Taageerada waxaa laga heli karaa fiidiyowyada iyo filimada Ingriisiga ah iyada oo ereyada la xafido da'da weyn. Si kastaba ha noqotee, waa inaanay halkan ku jirin subtitles. Sababtoo ah xaaladdan maskaxda si toos ah ayaa loo jiheeyaa halkan.
Sidoo kale waa in loo adeegsadaa nolol maalmeedka iyadoon loo eegin da'da ardayga. Carruurta yar yar ayaa caawin kara iyaga oo maalin walba waalidkood ula tababarta ereyada. Dadka da 'gaar ah koox da' ah ayaa si sahal ah ku sameyn kara tan ku celcelinta maalinlaha ah.
Sidee Loo Bartaa Ingiriisiga Dhallinta?
Haddii dhallinyaradu ay bartaan luqadaha, buugaagta sawirada waxay u noqon doonaan kuwo fudud oo caajis ku ah iyaga. Sababtaas awgeed, si loo helo wax-ku-oolnimo, waxaa lagama maarmaan ah in loo jeedsado dookhyo xirfadeed iyo in la kala saaro hababka. Tan awgeed, tababarka luuqadda ayaa lagula talinayaa.
Si kastaba ha noqotee, sidoo kale waa muhiim in la helo waxbarasho sax ah iyadoo luuqad la baranayo. Dugsiyada dhexdooda, casharrada waa in loo sameeyaa si sax ah oo ku habboon, iyo shaqada guriga waa in lagu dhammaystiro dib u dhac la'aan. Haddii kale, haddii aan markale la samayn, arrimaha waa la illoobi doonaa, markaa natiijooyinka ayaa hooseeya.
Sidoo kale waa xalka wanaagsan in la helo waxbarasho xirfadeed oo ka baxsan iskuulada iyo in la qoro koorso luqadeed. Maxaa yeelay kuwa wax ka dhiga machadyadan guud ahaan waxay ku hadlaan afkooda hooyo. Marka, dadku waxay toos uga qaadan karaan casharo wax ku ool ah kuwa ku hadla afkooda. Xifdinta ereyga, dhanka kale, waa hawl wax ku ool ah oo qof walba kaligiis qaban karo.
Si kastaba ha noqotee, tani maahan kiiska xaaladaha sida naxwaha barashada iyo qaab dhismeedka jumladaha. Maaddaama aan kaligood la baran karin, waxay ku habboonaan laheyd helitaanka tababar xirfadeed.
Tan awgeed, waxaa lagugula talinayaa inaad sameyso cilmi baaris ka hor intaadan iska qorin koorsada. Sababtoo ah waxaa jira xarumo badan oo bixiya waxbarashada Ingiriiska maanta. Si kastaba ha noqotee, dhammaantood isku tayo ma aha. Waxa aad u baahan tahay inaad ka warqabto halkan ayaa ah macallimiinta bixiya tababarka, dukumintiyada ay hayaan, iyo inay ku hadlaan afkooda hooyo.
Sidaa darteed, waa inaad baartaa siyaasadda waxbarashada ee hay'adda. Macluumaadkan waxaa lagu qoray boggooda. Maanta, hay'ado iyo shirkado badan ayaa dayactira goobahooda. Halkan, wuxuu ku siinayaa macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan naftooda iyo adeegyada ay qabtaan. Arrimaha sida sida koorsooyinka loogu bixiyo koorso luqadeed, inta saacadood iyo waxa ay tahay dib u soo celinta ayaa muhiimad weyn leh.
Sidaa darteed, ururada luqadaha badankood waxay ku dhajiyaan macluumaadkan boggooda internetka. Waa suurtagal in la helo dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka ah adoo hubinaya isla markaana si faahfaahsan u akhriyaya.
Kuwan oo dhan markaad tixgelisid waxay kaa caawin doontaa inaad si fiican u barato miraha Ingiriisiga iyo Ingiriiska. Si kastaba ha noqotee, tani maahan dhammaan, sida aan soo sheegnay. Waxaas oo dhami kuma filna doonaan haddii aadan adigu dadaal sameynin.
Sidaa darteed, ku soo celinta kelmadaha keligood guriga ayaa kaa caawin doona inaad gaarto waxtar badan. Midhaha aan ku siineyno Ingiriisiga waa mowduucyo aad muhiim ugu ah inaad barato miraha loo isticmaalo nolol maalmeedka.